सभामुखको निर्वाचन कहिले ? नेताहरुको आन्तरिक दौडधुप शुरु - Sutra TV Sutra TV
पूर्वमाओवादीमा धेरै आकांक्षी "
काठमाडौं — संघीय संसद सचिवालयकै कर्मचारी रोशनी शाहीले यौन दुव्र्यवहारको आरोप लाएपछि राजीनामा दिएका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रहरी हिरासतमा छन्। महरा प्रहरी हिरासतमा पुगेपछि सभामुख पद भने रिक्त छ। अब बन्ने सभामुखका बारेमा आन्तरिक छलफल हुने गरेको भए पनि सरकार र दलहरुबीच भने औपचारिक रुपमा छलफल हुन सकेको छैन।
सत्तारुढ नेकपा दलभित्रैको खिचातानीका कारण पनि सभामुख चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन ढिलाइ हुने देखिएको छ ।
संसद अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा अब सभामुखको चयन नियमित अधिवेशनबाट हुन्छ कि विशेष अधिवेशन बोलाउने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ । दलहरुबीच विशेष अधिवेशनबारे छलफलसमेत नभएकाले आगामी हिउँदे अधिवेशनले नै सभामुख चयन गर्ने सम्भावना बढेको छ ।
सभामुखबाट महराले राजीनामा दिएपछि कानुनी जटिलता उत्पन्न भएकाले पनि सभामुख चयनमा अन्योल देखिएको हो ।
सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिंगको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । महराले राजीनामा दिनुअघिसम्म सभामुख र उपसभामुख दुवै सत्तारुढ दल नेकपातर्फबाट थिए ।
यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सदनमा पटक–पटक आवाज उठाएको थियो । हाल यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । सभामुख पदमा नेकपाकै सांसदलाई चयन गर्नका लागि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले राजीनामा गर्नुपर्छ । यही कानुनी जटिलताका कारण नेकपाले रिक्त सभामुख पदको निर्वाचन प्रक्रियामा चासो देखाएको छैन ।
को को छन् सभामुखको दौडमा ?
नयाँ बन्ने सभामुखका लागि औपचारिकरुपमा छलफल सुरु नभएको भए पनि नेताहरु भने आन्तरिक तयारीमा लागेको नेकपा निकट स्रोत बताउँछ। नेकपाभित्र महराको उत्तराधिकारी बन्न चाहने आकांक्षी धेरै देखिएका छन् ।
पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच शक्ति बाँडाफाँड हुँदा सभामुख माओवादीका भागमा परेको थियो । महरा आफ्नो कोटाबाट सभामुख भएकाले स्वतः उक्त पद आफ्नो समूहले पाउनुपर्ने दाबी पूर्वमाओवादीको छ । त्यसैअनुरुप पूर्व माओवादीका नेताहरु आन्तरिक लबिङमा लागेका छन्।
स्रोतका अनुसार हालसम्म पूर्वमाओवादीबाट हरिबोल गजुरेल, अग्नि सापकोटा, देव गुरुङ, पम्झा भुसाल, लेखराज भट्ट र जनार्दन शर्माको दाबी छ । उनीहरु सबैले सम्बन्धित ठाउँमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।
यदि पूर्वमाओवादीले सभामुख पाएमा उक्त पदमा जाने व्यक्ति भने माथि उल्लेख गरिएकाहरुबाटै हुने निश्चित छ । तर, पूर्वएमालेबाट पटकपटक सभामुख र संविधानसभा अध्यक्ष रहिसकेका नेकपा उपनेता सुवास नेम्वाङले पुनः सभामुखको भूमिकामा जान चाहेका छन् ।